जहाँ थियो लाशसँग फोटो खिचाउने परम्परा
२०७५ मङ्सिर १६ आइतबार, काठमाडौं । समान्य हिसाबमा भन्नुपर्दा मरेको व्यक्तिसँग बसेर फोटो खिचाइँदैन । यद्यपि भिक्टोरियन कालमा मरेका मानिसहरुसँग परिवारसहित फोटो खिचाउने प्रचलन रहेको थियो । विशेषगरी कुनै बच्चाको ज्यान जाँदा परिवारसँग फोटो खिचाउने चलन निकै चर्चित थियो । ... बाँकी अंश»
१३० फिटको उचाइमा एक्लै बस्छन् यी क्रिस्चियन धर्मगुरु
२०७५ मङ्सिर १६ आइतबार, काठमाडौं । मानिसहरुको मनमा धेरै टाढा बसेर संसार हेर्ने चाहाना हुन्छ भने मानिस सन्यासी बन्छ । यस्तोमा उनीहरु गुफाहरु तथा कन्दराहरुमा आफ्नो घर बनाउन थाल्छन् । जर्जियाको एक साधु पनि यस्तै अनौठो प्रकृतिका छन्, जो १३० फिट अग्लो पहाडमा आफ्नो घर बनाएर बसेका छन्, त्यो पनि एक्लै । ... बाँकी अंश»
एउटा बालिकालाई लिन सधैं यो स्टेसनमा आउँछ रेल
२०७५ मङ्सिर १४ शुक्रबार, काठमाडौं । पढाइ मानिसको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो भन्ने नारा नलाउने मुलुक विश्वमा सायदै भेटिएलान् । यद्यपि त्यसलाई वास्तविक जीवनमा प्रयोगमा ल्याउने मुलुक भने निकै कम छ । यस्तोमा जापान एक उदाहरणको रुपमा देखिएको छ । जापानको होक्काइडो टापुमा केवल एउटा बालिकालाई लिन सिङ्गो रेल जाने गरेको छ । ... बाँकी अंश»
यस्तो चमत्कारी बल्ब, जुन ११७ वर्षदेखि लगातार बल्दै आएको छ
२०७५ मङ्सिर १४ शुक्रबार, काठमाडौं । कुनै बल्ब कति समय टिक्ला ? यो प्रश्नको यकिन जवाफ हुँदैन । कुनै बल्ब छिटै फ्युज हुन्छ भने कुनै बल्ब अलिक लामो समयसम्म टिक्छ । कुनै बल्ब बजारबाट ल्याएको केही दिनमै फ्युज हुन्छ भने कुनै बल्ब २-४ महिनासम्म टिक्छ । धेरै समयसम्म टिक्ने बल्ब पनि २-३ वर्षमा फ्युज हुने गर्छ । ... बाँकी अंश»
१० वर्ष लगाएर रुसी अर्बपतिले बनाए यस्तो घर
२०७५ मङ्सिर १३ बिहिबार, काठमाडौं । मानिसहरु आफ्नो प्रेमको लागि धेरै हदसम्म जाने गर्छन् । विश्वका ठुलाठुला मानिसहरुले आफ्नो प्रेमको लागि विभिन्न भवनहरु निर्माण गरेको कथाहरु सुन्दै पनि आएका छौं । ... बाँकी अंश»
हाम्रो नेपालः चामल पाउन बैंक स्टेटमेन्ट देखाउनुपर्ने
२०७५ मङ्सिर १३ बिहिबार, हुम्ला । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई चामल पाउनका लागि तलब खाएको बैंक स्टेटमेन्ट देखाउनुपर्ने बाध्यता छ । ... बाँकी अंश»
चिनियाँ ५ स्टार होटलहरुको सफाइ यस्तो !
२०७५ मङ्सिर १२ बुधबार, काठमाडौं । चीनको विलासी होटलहरुको सफाइको विषयमा एक भिडियो भाइरल भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सफाइको भिडियो भाइरल भएको छ । सफाइ गर्ने अनौठो तरिकाको कारण यो भिडियो भाइरल भएको हो । ... बाँकी अंश»
जहाँ १२ हजार रुपैयाँमै पाइन्छ निजी टापु
२०७५ मङ्सिर १२ बुधबार, काठमाडौं । चलचित्र 'कहो न प्यार हे' मा ऋतिक रोशन र अमीषा पटेल एक टापुमा छोडिएको देखाइएको छ । जहां उनिहरु दुवै जना बाहेक कोहि पनि हुदैन । ... बाँकी अंश»
जब उडेकै विमानमा निदाए पाइलट
२०७५ मङ्सिर १२ बुधबार, काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा एक पाइलट विमान चलाउँदा चलाउँदै निदाएका छन् । विमान चलाउँदै गर्दा पाइलट निदाएपछि विमान गन्तव्यभन्दा ४६ किलोमिटर पर पुगेको थियो । ... बाँकी अंश»
यी धनी मानिसहरुको जीन्दगी देख्दा जो कोहीलाई लाग्नसक्छ ईर्ष्या
२०७५ मङ्सिर ११ मंगलबार, काठमाडौं । धनी मानिसहरुको जीन्दगी केही विलासी किसिमको हुन्छ भने धेरैलाई थाहा हुन्छ तर धनी मानिसहरुका बच्चाहरुको ऐस आरामको जीन्दगीको विषयमा भने धेरै मानिसहरु जानकार नहुन पनि सक्छन् । ... बाँकी अंश»
पाकिस्तानका केहि अनौठा नियम
२०७५ मङ्सिर १० सोमबार, काठमाडौं । विश्वका सबै मुलुकहरुको आफ्नै किसिमको कानुन हुन्छ । मुलुकको नीति तथा अवस्थालाई मिल्दो गरी ल्याइएका नियमहरु अर्को मुलुकहरुमा नमिल्नु स्वाभाविक हो । तर पाकिस्तानका केही कानुनहरु यस्ता छन्, जुन सुन्दा पनि जो कोहीलाई अचम्म लाग्नसक्छ । ... बाँकी अंश»
जिउँदै स्वर्ग देख्न चाहनुहुन्छ ? यो मन्दिरको भ्रमण गर्नुहोस्
२०७५ मङ्सिर १० सोमबार, काठमाडौं । विभिन्न कथाहरु, किताबहरु र टेलिभिजनमा चित्रण गरिने धार्मिक कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट मानिसहरुमा स्वर्गको चित्रण गरिने गरिएको छ । यस्तो चित्रण गर्दा धेरैजसो सुनको धेरै चर्चा हुने गर्छ । जसको कारण मानिसहरुको मनमा स्वर्गको नाम लिनेबित्तिकै सुन दिमागमा आउँछ । ... बाँकी अंश»
२०७५ मङ्सिर १० सोमबार, काठमाडौं । कहिलेकाँही संसारमा निकै अनौठो लाग्ने समाचारहरु आउने गर्छन् । यसै सिलसिलामा २३ वर्षीय युवकले ९१ वर्षीया वृद्धासँग विवाह गरेको समाचारले प्राथमिकता पाएको छ । ... बाँकी अंश»
जब अन्डरवेयर लिएर संसदमा पुगिन् सांसद
२०७५ मङ्सिर १० सोमबार, काठमाडौं । विश्वमानचित्रमा समाज कता गइरहेको छ ? यसको छिनोफानो गर्न सहजै मुस्किल छ । किनकि यसको मापन गर्न नै सकिएको छैन । त्यसको उदाहरण सामाजिक संजाल हेरे पुग्छ । ... बाँकी अंश»
आत्महत्या गरेपछि झनै दुःख !
२०७५ मङ्सिर ८ शनिबार, काठमाडौं । हरेक धर्ममा आत्महत्यालार्इ महापापको रुपमा लिने गरिन्छ । एक व्यक्ति आत्महत्या त्यतिबेला गर्छ । जतिबेला उ हर प्रकारले निराश हुनजान्छ । ... बाँकी अंश»
झुक्किएर पनि नगर्नुस् आत्महत्या, मरेपछि झनै पाउनुहुनेछ दु:ख
२०७५ मङ्सिर ८ शनिबार, काठमाडौं । हरेक धर्ममा आत्महत्यालार्इ महापापको रुपमा लिने गरिन्छ । एक व्यक्ति आत्महत्या त्यतिबेला गर्छ । जतिबेला उ हर प्रकारले निराश हुनजान्छ । अथवा उ आफ्नो दिक्दार जिन्दगी भारी पर्न थाल्छ त्यसपछि नै मान्छे आत्महत्याको बाटो अपनाउँछ। आत्महत्या गर्ने बढी भन्दा बढी व्यक्ति आफ्नो वर्तमान जीवनको हर समस्यासँग हार मानिसकेका हुन्छन् । आत्महत्या गर्नेहरुले जिउनुको कुनै आधार नदेखेर त्यसको एउटै मुक्तिको बाटो जीवन त्याग गर्नुमा नै देखेपछि उ आत्महत्याको बाटोमा जान्छ । ... बाँकी अंश»
किसानले राखे खेतमा सन्नी लियोनीको पोष्टर, यस्तो छ कारण
२०७५ मङ्सिर ८ शनिबार, काठमाडौं । मान्छेका के कुरा सन्नी लियोनी भनेकी भगवानले दिएकी यस्ती जादूमयी महिला हुन् जसलाई देखेपछि पशु र पंक्षी पनि लठ्ठ पर्छन् होला । उनको रुपदेखि मानिस अवाक् छन् । उनको अनुहारमा जादू छ । शरीरमा त्यो वासना छ जुन वासनासंग भगवान ईन्द्र पनि काबुमा आउँथे होला । ... बाँकी अंश»
आफ्नै दूध बेचेर लाखौं कमाइरहेकी महिला, अहिलेसम्म बिक्री गरिन् ५०० लिटर दूध
२०७५ मङ्सिर ८ शनिबार, काठमाडौं । मानिसहरु रोजगारीको लागि धेरै प्रायास गर्ने गर्छन् । साथै विभिन्न किसिमका उपायहरु पनि खोज्ने गरेका छन् । यस्तोमा एक महिला आफ्नै दूध बिक्री गरेर खलपति बनेकी छिन् । झट्ट सुन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ तर यो साँचो घटना हो । ... बाँकी अंश»
विवाहको कार्डमा मोदीको गुनगान !
२०७५ मङ्सिर ७ शुक्रबार, काठमाडौं । विवाहको कार्ड आकर्षक र विशेष होस् भन्ने सबैको ध्याउन्न हुन्छ । यसका लागि मानिसहरुले हरसम्भव प्रयास गर्ने गर्छन् । भारतको कर्नाटकमा भने एक जोडीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीप्रति माया देखाउँदै छपाएको विवाह कार्डको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ... बाँकी अंश»
२०७५ मङ्सिर ७ शुक्रबार, काठमाडौं । बदला भन्ने शब्द मानिसहरुको लागि निकै हानिकारक बन्नसक्छ भन्ने कुराको उदाहरण एक महिलाले दिएकी छिन् । बदलाको रापमा जलेकी महिलाले आफ्ना प्रेमीको हत्या गरेर उनसको मासुबाट बिरयानी बनाएर नोकरलाई खुवाएकी छिन् । ... बाँकी अंश»